#4 စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ချဉ်းကပ်မှု | Mycanvas
[အနည်းဆုံးသတင်းစာ ၂ စောင်ကိုဖတ်ပါ]
သင် သတင်းတွေကိုဘယ်လိုကြည့်လေ့ရှိလဲ? များသောအားဖြင့် Online ကနေတစ်ဆင့်ကြည့်ဖြစ်တာဖြစ်မှာပါ။ သတင်းစာဖတ်တာက Date အောက်နေပြီလို့ သင်ထင်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့်သတင်းစာဖတ်ခြင်းဟာ Online က သတင်းကြည့်ခြင်းထက်ပိုပြီးကောင်းကျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ Online Media တွေဟာ သင်တို့စိတ်ဝင်စားလောက်မယ့်သတင်းတွေကိုပဲဖော်ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် တခြားသတင်းတွေကိုသင်ဖတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားတဲ့သတင်းစာကိုဖတ်ရှုခြင်းက သင့်အား ယခင်ကစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းသောအရာတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန့်သိစေပါတယ်။
သင်ဘယ်သူနဲ့အတူနေ့လည်စာစားလေ့ရှိသလဲ? ကျွန်တော်အပါအဝင် တခြားစီးပွား‌ရေးသမားတော်တော်များများက ကိုယ့်ရဲ့ Team Members တွေနဲ့ပဲ နေ့လည်စာစားလေ့ရှိကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာနေ့လည်စာစားချိန်မှာစိတ်အေးလက်အေးနားချင်ပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ Career Development အတွက် သင်နဲ့အတူရှိနေကြမဟုတ်တဲ့ Members တွေနဲ့နေ့လည်စာစားခြင်းကသင့်ကိုစိတ်အားထက်သန်ဖို့လှုံ့ဆော်စေပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဘာတွေကြုံခဲ့ရသလဲဆိုတာကို နေ့လည်စာစားချိန်မှာစကားပြောဆိုပြီးသင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင့်ရဲ့ Boss နဲ့ Supervisor တွေက သင်နဲ့နေ့လည်စာအတူတူစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလိုချင်ကြပါတယ်။
သင်ဝတ်စုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရုစိုက်လေ့ရှိသလား? ဒါဆိုရင် သင်ဝတ်စုံဝယ်ဖို့ဘယ်လိုရွေးလေ့ရှိသလဲ?လူတစ်ယောက်နဲ့ Date ဖို့သွားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် အလုပ်မှာအရမ်း Fashion ကျတဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်နဲ့မလိုက်ဖက် မသင့်တော်တဲ့ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်လာတာဟာ သင့်ရဲ့ First Impression ကို ကျစေပါတယ်။ နည်းနည်းဈေးကြီးပေးရရင်တောင် သင်နဲ့သင့်တော်တဲ့ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်တာက သင့်ကိုပိုပြီးကြည့်ကောင်းစေမှာပါ။
“စိတ်မရှိပါနဲ့၊ ကျွန်တော်ပြောတာလေးတစ်ချက်နားထောင်ပေးလို့ရမလား?” ဆိုတာမျိုးပြောပြီ စသင့်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Supervisor တွေနဲ့ စီနီယာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးထားတဲ့အရာတွေကိုနားလည်မှုလွဲတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Meeting တစ်ခုမှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကြိ ပြသရပါမယ်။ စစချင်းမှာပေးထားတဲ့ စကားပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်မြင်မှုကိုပြောဖို့အစပျိုးရပါမယ်။
သို့သော်လည်းသင့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုပဲမှန်တယ်လို့တွေးမထားပါနဲ့။ သင့်ယူဆချက်တွေကမှားနေခဲ့ပြီး တခြားသူတွေကို သင့်ရဲ့ယူဆချက်အမှားတွေကိုထောက်ခံခိုင်းနေသလိုဖြစ်လာတဲ့အခါ သင့်ဂုဏ်သတင်း ဒါမှမဟုတ် တခြားသူတွေရဲ့ သင့်အပေါ်မှာရှိတဲ့အကဲဖြတ်မှုတွေ ဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်မှုဟာအရမ်းအင်အားကြီးပါတယ် သို့သော်လည်း သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်မှုလွန်ကဲနေလို့တော့မဖြစ်ပါဘူး။